Shirweynihii Ururka Midnimo oo qodobo badan lagu meelmariyay. | SONNA
You are hereHome » Shirweynihii Ururka Midnimo oo qodobo badan lagu meelmariyay. Shirweynihii Ururka Midnimo oo qodobo badan lagu meelmariyay.
Submitted by SONNA on Mon, 22/07/2013 - 14:40
Garowe(Puntlandi.com):- Magaalada Garowe ee Caasimada puntland waxaa maalintii labaad ka socda Shirweynihii Urur Siyaasadeedka MIDNIMO oo ay ka soo qaybgaleen Ergooyin farabadan oo matalaysa Taageerayaasha iyo Xubnaha Ururka MIDNIMO ee gobollada.
Intii uu shirku socday waxaa aad loo falanqeeyay, doodo dhaadheerna looga yeeshay Dastuurka Ururka oo si rasmi ah kulankii shalay loogu meelmariyay kadib markii qodobada qaarkood la saxay oo wax lagu daray waxna laga dhimay.
Sidoo isla kulankii shalay waxaa lagu xulay xubnihii golaha Dhexe ee ururka waxayna Ergadu u codeeyeen xubnaha golaha dhexe ee Ururka oo ka koobnaa 95 xubnood.
Maanta oo uu shirku galay maalintiisii ugu dambaysay waxaa la guda galay ajandahana ka mid ah Doorashada Guddoomiyaha rasmiga ah ee Ururka, Guddoomiye ku xigeenka 1-aad iyo 2aad ee Ururka, Xoghaynta, guddiga Fulinta ee Ururka oo ka koobnaan doonaa 11 xubnood oo ay ku jiraan Guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku xigeen.
Sida aan xogta ku helnay Shirweynahanna laga cadeeyay Asaasayaasha Ururku waxay ka koobnaayeen 42 xubnood oo 20% ay wataan shahaadada Doctorate, 70 % Masterate, 10 % Bachelors iyo Diploma halkaas oo ay ka cadahahay dhamaantood in ay yihiin dad Aqoonyahano ah.
Waxaa xusid mudan in Musharaxiinta ururkan MIDNIMO ee hogaanka dawlada sida Musharaxa Madexweynaha ay ku imaanayaan qaab la mid ah sida Xibiyada Caalamka gaar ahaan Axsaabta Wadanka Maraykanka oo ah in Xil walba oo xisbigu u sharaxayo xubin ka mid ah Ururka Midnimo wuxuu marayaa hab doorasho ah oo ururka dhexdiisa ah markaas oo hadii uu helo kalsoonida ururka uu ururku u shaxayo xilkaasi.
Shirkan waxaa la filayaa in uu ilaa galabta soo gabagaboobo islamarkaana lagu doorto dhamaan xubnahani kadibna loo gudbo hawlaha kale ee Ururka u yaala.Wararkan wixii ka soo kordha kala soco qaybaha dambe ee warbaahinta Puntlandi.comwww.puntlandi.com